Baarlamanka Soomaaliya Oo Isku Raacay Inaan Laga Noqon Karin Saxiixa Mooshin Gaaray Gudoonka * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Oct 23, 2013, (Mareeg.com): Xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa waxay ansixiyeen qodobbo ka mid ah xeer-hoosaadka baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo wax ka bedel lagu sameeyay.
Furitaanka fadhiga Baarlamaanka ee maanta waxaa ka hadlay ugu horeyn Guddoomiye ku xigeenka Koobaad ee Golaha Shacabka Jeeylaani Nuur Iikar oo isagu shir guddoominayay qeybta hore ee fadhiga Baarlamaanka, waxaana uu Xildhibaannada u sharaxay ajandaha.
Xildhibaannada Baarlamaanka ayaa guda galayn sii amba qaadida ka doodista qodobada wax ka bedelka Xeer Hoosaadka Baarlamaanka oo maal mahanba u soo socotay islamarkaana ay soo jeediyeen gudiga xeer Hoosaadka, Anshaxa, Xasaanada, iyo Daryeelka Xildhibaannada.
Mudanayaasha Baarlamaanku waxay ansixiyeen qaar ka mid ah qodobadii la soo jeediyay, qaarkoodna waa ay diideen, balse qodobada ugu waaweynaa ee la ansxiyey waxaa ka mid ahaa qodobka 75-aad ee Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka oo isagu ku saabsan Codka Kalsooni kala noqoshada Xukuumadda.
Qodobkaas ayaa lagu kordhiyay farqooyin cusub oo ay ka mid tahay in mooshin laga keeno xukuumadda aan la faafin Karin ka hor maalinta ay furmayso dooda mooshinkaasi iyo in Xildhibaan kasta uu xaq u leeyahay inuu ku biiro ama ka baxo soo jeedin mooshin inta aan Gudoonka Golaha loo gudbin, mar hadii loo gudbiyana gudoonka saxiixayaasha mooshinkana aan laga noqon Karin.
Xildhibaannada baarlamaanka ayaa waxay qodobkan ku meel-mariyeen cod aqlabiyad ah, iyadoo gudddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Mahad C/lla Cawad oo ansixinta kaddib hadlay uu sheegay in arrintan ay tahay casharro ay ka barteen kulammadii hore ee baarlamaanka.
“Arritan waa casharro laga soo bartay kal-fadhiyadii koowaad iyo labaad ee baarlamaanku yeeshay. Runtiina mooshin ka laabashadu waa mid sumcadda baarlamaanka dhaawacday. Mooshinno badan oo baarlamaanka la hor keenay ayaa dib looga laabtay,” ayuu yiri Mahad Cabdalle Cawad.
Qodobada kale ee Xildhibaannada Baarlamaanku u codeeyeen maanta ee sida aadka ah saameynta uu lahaa waxaa ka mid ahaa qodobka 84-aad oo la xiriira wax ka bedelka Xeer Hoosaadka, ayadoo mudaneyaasha Baarlamaankuna ay diideen in qodobkaasi wax ka bedel lagu sameeyo oo loo daayey sidiisii hore oo aheyd in tirada codka wax ka bedelka xeer Hoosaadka looga baahanyahay ay tahay 50+1 tirada guud ee Golaha Shacabka.
Baarlamaanka ayaa todobaadyadii tegay ka doodayey qodobo badan oo horyaala, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen wax ka badelka xeer hoosaadka uu ku shaqeeyo.